सहाराविहीन बनेका तीन बालिका भन्छन्- हामि अब कसको सहारामा बाँच्ने ? « Postpati – News For All
सहाराविहीन बनेका तीन बालिका भन्छन्- हामि अब कसको सहारामा बाँच्ने ?
भदौ २०, सल्यान । बाग्चौर नगरपालिका ४, सेतोगुराँसकी ८ वर्षीय सुनीता विकलाई अघिल्लो बुधबारको घटनाबारे कसैले सोधे उनी भक्कानिन्छिन् ।
उनकी दिदी १३ वर्षीया कमला र बहिनी पुतलाको अवस्था पनि उस्तै छ । आफन्तसँग बसिरहेका उनीहरूको एक सातादेखि आँखा ओभाएका छैनन् । उनीहरूमा बेला–बेला टोलाइरहने समस्या देखिएको छ ।